Kismaayo News » Farmaajo oo iska bari yeelay eeddii Musuqmaasuqa
Farmaajo oo iska bari yeelay eeddii Musuqmaasuqa
Kn: Raisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta jawaab ka bixiyey qoraalkii musuqmaasuqa ee lagu eedeeyey xukuumadda Soomaaliya iney lunsatey lacag dhan malaayiin Doolar. Farmaajo oo soo dhaweeyey Warbixintaas ayaa ku sheegey iney jiilasho soo socda ee Soomaaliyeed u tahay tusaale wanaagsan. Warsaxaafadeedka ayaa sidan u qornaa
Jubbaland oo ku dhawaaqday gooni isu taag ! Wasiiradii oo u hoyday garoonka Kismaayo Cunuggaan Marabee Qaata !! Dhagayso Sh Aw-libaax”Dowladda Soamaaliya iyo Dowladda Jubbaland waxay ka wada hadli doonaan Qaybsiga Khayraadka iyo Siyaasada oo kaliyah”‏ Xalane oo ra’iisul wasaare u sharaxan All material copyright Kismaayo News © Kismaayonews.com. All Rights Reserved